Growth Hacking ဆိုတာဘာလဲ။ ဤနေရာတွင်နည်းစနစ် ၁၅ ခု | Martech Zone
Growth Hacking ဆိုတာဘာလဲ။ ဒီနေရာမှာနည်းစနစ် 15 ရှိပါတယ်
သောကြာနေ့, ဇန်နဝါရီလ 15, 2021 သောကြာနေ့, ဇန်နဝါရီလ 15, 2021 Douglas Karr
ဝေါဟာရ hacking ၎င်းသည်ပရိုဂရမ်းမင်းကိုရည်ညွှန်းသောကြောင့်မကြာခဏ၎င်းနှင့်ဆက်စပ်သောအနုတ်လက္ခဏာဆက်စပ်မှုရှိသည်။ ဒါပေမယ့်ပရိုဂရမ်တွေကို hack တဲ့သူတွေတောင်မှအမြဲတမ်းတရားမ ၀ င်တဲ့အရာဒါမှမဟုတ်ထိခိုက်နစ်နာမှုတွေမဖြစ်စေဘူး။ တစ်ခါတစ်ရံ Hacking သည်ပြသနာကိုကျော်လွှားရန်သို့မဟုတ်ဖြတ်လမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အလားတူယုတ္တိဗေဒကိုကျင့်သုံးခြင်းအားဖြင့်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းအတွက်လည်းအကျိုးရှိသည်။ အဲဒါပါပဲ တိုးတက်မှုနှုန်း hacking.
ကြီးထွားမှု hacking ကိုမူလကမှလျှောက်ထားခဲ့သည် စတင် သူသည်အသိပညာနှင့်မွေးစားခြင်းကိုတည်ဆောက်ရန်လိုအပ်သည်။ သို့သော်၎င်းတွင်လုပ်ရန်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဘတ်ဂျက်သို့မဟုတ်အရင်းအမြစ်များမရှိခဲ့ပါ။ Sean Ellis သည်ထိုဝေါဟာရကိုသူ၏ဘလော့ဂ်တွင် ၂ ဝ ၁ ဝခုနှစ်တွင်ရေးသားခဲ့သည် သင်၏ Startup အတွက်တိုးတက်မှုရှိသောဟက်ကာကိုရှာပါ သူက Growth Hacker တစ်ယောက်ကိုသမားရိုးကျ full-time marketer ငှားရမ်းရန်ရွေးချယ်စရာအဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
ကြီးထွားမှုနှင့်ဟက်ကာများသည်ကြီးထွားမှုနှင့် ၀ င်ငွေကိုအရှိန်မြှင့်ရန်တိုတောင်းသောကာလတိုမဟာဗျူဟာများကိုရိုးရာရေရှည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာကိုအစားထိုးခြင်းအဖြစ်ရှုမြင်ခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းတိုးတက်မှုဟက်ကာများ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုကုမ္ပဏီတိုင်းကမြင်တွေ့ခဲ့ကြရပြီး၊
ရိုးရာစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းနှင့်အွန်လိုင်းအော့ဖ်လိုင်းများသည်ကုမ္ပဏီများအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်ကြီးထွားမှုကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ထိုနည်းဗျူဟာများသည်ကုမ္ပဏီ၏အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှတဖြည်းဖြည်းချင်းခိုင်မာလာသည်။ သို့သော်သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုရိုးရာမဟုတ်သောနည်းဗျူဟာများဖြင့်စတင်ရန်သို့မဟုတ်တိုးမြှင့်ရန်နည်းလမ်းများရှိသည်။
ငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဟူသောဝေါဟာရကိုမကြိုက်ဘူးနေစဉ် hacking၎င်းသည်ခေတ်ရေစီးကြောင်း (နှင့်မကြာခဏအလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်း) ပျောက်သွားသည့်ဝေါဟာရတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျနော့်အမြင်တွင်မျှတသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာများသည်ရိုးရာ၊ ရေရှည်မဟာဗျူဟာများနှင့်ကြီးထွားမှုဆိုင်ရာဟက်ကာများကိုထိရောက်စွာအသုံးပြုသင့်သည်။
Growth Hacking ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲ။
ကြီးထွားမှု hacking သည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ငွေရေးကြေးရေးများစွာမကုန်ဘဲကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ထိတွေ့မှုများစွာရရှိရန်ဖန်တီးမှုနှင့်သမားရိုးကျမဟုတ်သောနည်းလမ်းများကိုအသုံးပြုသည်။ အဆိုပါအသုံးအနှုန်းသည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဘတ်ဂျက်မရှိသောနည်းပညာကုမ္ပဏီများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ သို့သော်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာအသုံးချနိုင်ခြင်း၊ analyticsအလျင်အမြန်သူတို့၏ online ရှိနေမှုကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်နှင့်စမ်းသပ်ရန်ဖြစ်သည်။
Eliv8 သူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးကြီးထွားမှုဟက်ကာနည်းစနစ် ၁၅ ခုနဲ့စုပေါင်းထားတဲ့ဒီလှပတဲ့အချက်အလက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။
3rd Party ပရိသတ်များသို့ထိပုတ်ပါ - Guest ည့်သည်ဘလော့ဂ်ရေးသားခြင်းအကြောင်းကိုဖော်ပြထားသည်၊ သို့သော် podcasting သည်အခြားပရိသတ်များနှင့်ထိတွေ့ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ပရိသတ်များနှင့်အာရုံစူးစိုက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ podcast ပေါ်ရှိသြဇာညောင်းသူများအားကျွန်ုပ်တို့မကြာခဏဖိတ်ခေါ်သည်။
တတိယပါတီပလက်ဖောင်းများကိုအသုံးပြုခြင်း - ဒါဟာအလွန်ကောင်းတဲ့အကြံဥာဏ်တစ်ခုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့မှာစာရင်းကောင်းတစ်ခုရှိပါတယ် အွန်လိုင်းကုန်ပစ္စည်းများအကောင့်သို့မဟုတ်မြှင့်တင်ရန်ဤနေရာတွင်.
သင်၏ပြိုင်ဘက်များ၏ပရိသတ်များကိုပစ်မှတ်ထားပါ - သင်၏ပြိုင်ဘက်များ၏နောက်လိုက်များကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်လစာနှင့်အော်ဂဲနစ်လူမှုရေးကိရိယာများနှစ်မျိုးလုံးရှိသည်။ သင်သူတို့ကိုကူညီနိုင်လျှင်သူတို့နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ပြိုင်ဘက်များကိုသာလွန်ကောင်းမွန်ပြီး၎င်းတို့ဖောက်သည်များကိုကူညီနိုင်လျှင်၎င်းတို့သည်သင်၏လမ်းကို ဦး တည်လိမ့်မည်။
သင့်အတွက်အကြောင်းအရာဖန်တီးပါ ဝယ်သူခရီး - ၀ ယ်သူများသည်အွန်လိုင်းမှရှာဖွေနေသည့်မေးခွန်းများကိုဖြေပါ။
စာမျက်နှာအတွက်သီးခြားအကြောင်းအရာဖန်တီးပါ - ဆောင်းပါး၏အမျိုးအစားကို အခြေခံ၍ ပစ်မှတ်ထားသောတက်ကြွသောကြော်ငြာများကို အသုံးပြု၍ စာဖတ်သူများအတွက်သက်ဆိုင်သောခေါ်ဆိုမှုကိုပြုလုပ်သည်။
တစ် ဦး ကပစ်မှတ်ထားအီးမေးလ်များစာရင်းကိုတည်ဆောက်ပါ - သင်၏ဖောက်သည်များကိုသင်၏အလားအလာများမှခွဲထုတ်ပြီးသင်၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများအကြောင်းကိုပညာပေးပါ။
အတွေ့အကြုံကိုကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ပါ - pages ည့်သည်အားစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားသောသို့မဟုတ်၎င်းတို့ကိုအပိုင်းလိုက်ခွဲထားသောသင်၏စာမျက်နှာများသို့အဘယ်အရာကိုထည့်သွင်းနိုင်သနည်း။ သူတို့ဟာဖောက်သည်တစ် ဦး လား။ သူတို့ပြန်လာနေကြပြီလား သူတို့ကတစ် ဦး လွှဲပြောင်း link ကိုနှိပ်နေပါသလား? သင်မည်သူမည်ဝါအပေါ် မူတည်၍ အတွေ့အကြုံနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်လျှင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောပြောင်းလဲခြင်းလုပ်ဆောင်မှုကိုသင်မောင်းနှင်နိုင်သည်။
လှည်းစွန့်လွှတ်သတိပေးချက်များ - ဒါကအီလက်ထရွန်နစ်စီးပွားရေးပလက်ဖောင်းတိုင်းမှာရှိသင့်တဲ့ကြီးမားတဲ့နည်းဗျူဟာတစ်ခုပဲ။ ၎င်းသည်တစ်စုံတစ် ဦး အားအရောင်းအ ၀ ယ်ပတ် ၀ န်းကျင်သို့မဟုတ်ကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုနှင့် ပတ်သတ်၍ ထပ်ဆောင်းအခြေအနေနှင့်ပြောင်းလဲရန်လိုက်စားရန်အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်သည်။
အိမ်ရှင်ပြိုင်ပွဲ - မကြာခင်မှာငါတို့ပြိုင်ပွဲတချို့စတင်တယ် ဟဲလိုသင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာနှင့်လူမှုရေးဆိုဒ်များကိုဖြတ်သန်းသွားသောခိုင်လုံသောခိုင်မာသည့်ပလက်ဖောင်းတစ်ခု။
သီးသန့်ရပ်ကွက်တစ်ခုတည်ဆောက်ပါ - ဒီတစ်ခုကအလုပ်လုပ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင် ပရိသတ်ကိုအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းပေးပါသင်၏ ၀ န်ထမ်းများမှငွေများ ၀ ယ်ယူနိုင်ခြင်း PS: ဒါကတကယ်ကိုခက်ခဲပါတယ်။
ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းကိုအလိုအလျောက်ဖြစ်စေသည် - ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကိုပြုစုပျိုးထောင်ပေးခြင်းနှင့်အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ခြင်းများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည် Wishpond - မယုံနိုင်လောက်အောင်တတ်နိုင်သောဖြေရှင်းနည်းတစ်ခုနှင့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောရလဒ်များရရှိခြင်း။
ဆုလာဘ်မျှဝေခြင်းနှင့်ရည်ညွှန်းသည် - သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကပြောသည့်အခါလူများသည်တစ်စုံတစ်ခုလုပ်ရန်ပိုဖြစ်နိုင်သည်။ သင့်တွင်ယနေ့ပလက်ဖောင်းတစ်ခုရှိပါကသင့်တွင်၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သောစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအစီအစဉ်တစ်ခုရှိသင့်သည်။
ကြော်ငြာများပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း - visitors ည့်သည်များကို ၀ က်ဘ်ဆိုက်သို့၎င်းတို့နောက်မှလိုက်သည့်ကြော်ငြာများဖြင့်ပြန်လာပါ။ Retargeting သည်အမှတ်တံဆိပ်ရှာဖွေမှုကို ၁၀၀၀% အထိတိုးနိုင်ပြီး ၄ ပတ်အကြာတွင် ၇၂၀% အထိလာရောက်နိုင်သည်။
သင့်ရဲ့ဒေတာကိုသုံးပါ - ၅၀% သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကို ၀ င်ငွေရရန်ရရန်ခက်ခဲစေသည်။ ဒေတာအသုံးချနှင့် analytics သင်၏ ROI တိုးတက်လိမ့်မည်
စကေးမပေးသောအရာတို့ကိုလုပ်ပါ - အခွင့်အလမ်းများကိုဆက်လက်စဉ်းစားပြီးအခြားတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ hack မဟာဗျူဟာများကိုဖော်ထုတ်ရန်ကြိုးစားပါ။
ငါဒီမှာငါ့အကြိုက်ဆုံးတိုးတက်မှု hacking နည်းစနစ်ကိုထည့်မယ်။
အသုံးပြုခြင်း Semrushကျွန်ုပ်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သည်ဒုတိယနှင့် ၁၀ ခုကြားတွင်ရှိသည်၊ ပြိုင်ဆိုင်မှု၏စာမျက်နှာများကိုကြည့်ရှုခြင်း၊ အချက်အလက်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောဂရပ်ဖစ်များ၊ အချို့သောစာရင်းဇယားများဖြင့်ပြန်လည်ရေးသားခြင်းနှင့်စာမျက်နှာများကိုပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်အသစ်အဖြစ်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်း။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုကြီးစွာသောအလုပ်တစ်ခု လုပ်၍ စာမျက်နှာကိုထပ်မံမြှင့်တင်သောအခါလူများသည် မျှဝေ၍ ရည်ညွှန်းသည်နှင့်အမျှ၎င်းသည်ပိုမိုမြင်သာမြင်သာမှုနှင့်အဆင့်မြင့်အဆင့်များရရှိသည်ကိုတွေ့ရလေ့ရှိသည်။
တိုးတက်မှုနှုန်း Hacking အရင်းအမြစ်များ
အပါအဝင်အချို့သောအပိုဆောင်းအရင်းအမြစ်များကိုအွန်လိုင်းရှိပါတယ် Eliv8, Reddit, GrowthHackers, ပြီးနောက် တိုးတက်မှုနှုန်း Hacking လမ်းညွှန်.
Tags: စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုလှည်းစွန့်ခွာပြိုင်ပွဲဒေတာများအီးမေးလ်အပိုင်းတိုးတက်မှုနှုန်း hackingတိုးတက်မှုနှုန်း hacking စိတ်ကူးများတိုးတက်မှုနှုန်း hacking နည်းစနစ်ဧည့်သည်ဘလော့ဂ်မင်္ဂလာပါpersonalizationရည်ညွှန်းretargetingဆုလာဘ်လူမှုမီဒီယာပစ်မှတ်ထားပစ်မှတ်ထားအီးမေးလ်စာရင်းများပစ်မှတ်ထားစာရင်းများထောက်ခံစာတိုးတက်မှုနှုန်း hacking ကဘာလဲ
စက်တင်ဘာ 29, 2016 မှာ 3: 11 AM
ငါသည်သင်တို့၏ဆောင်းပါးကိုဖတ်, ဒီ post တိုးတက်မှုနှုန်း hacking နှင့်ပတ်သက်။ အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့။ မင်းဆောင်းပါးမှာမင်းပြောသမျှအတိုင်းငါလိုက်နာခဲ့တယ် ဤအရာအလုံးစုံဥပမာတိုးတက်မှုနှုန်း hacking များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
သင်ဘယ်လိုထင်ပါလဲ? ပြန်ကြားချက် Cancel